Ihe omimi: Ndi nyocha akwukwo ihe omimi maka onye mmemme
Ọ bụrụ na ị dị mkpa iji dọpụta data site na saịtị ndị ọzọ, Ohere ị ga - ahọrọ karịa API ọrụ. Otú ọ dị, ụfọdụ scrapers web na ịntanetị nwere ike ime ka ọrụ gị dị mfe, na dịka onye mmemme ma ọ bụ onye mmepụta, ị nwere ike wepu data site na ọtụtụ saịtị dịka ịchọrọ.
Nchịkọta data bụ ihe ntanetịime weebụ dị mfe ma dị ike. Ọ bụghị nanị na-ese onyinyo ihe odide na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma na-enyocha ndepụta na tebụl site n'otu peeji ma ọ bụ ọtụtụ. Mgbe ahụ, ngwá ọrụ a na-agbanwe ma ọ bụ na-echekwa data esinyere faịlụ XLS na CSV - sobivus horoskoop. Ọ bụ n'efu na-abịa na ọtụtụ atụmatụ. Otú ọ dị, ndị mmemme na ndị ọkachamara ọkachamara ga-eji nsụgharị ụgwọ ya nke na-abịa na ọtụtụ njirimara ma ọ dịghị achọ ihe ọ bụla.
Web Scraper bụ nchịkọta Chrome nke enwere ike ịgbakwunye gị nchọgharị Google Chrome. Ọ na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta saịtị iji gosipụta ụzọ a ga-esi na saịtị ma ọ bụ ụdị data ị chọrọ iji kpochapụ. Ndị mmemme na ndị mmepe dị mkpa iji tinye ndọtị a na Chrome ha ma malite iwepụta data.
Mgbe a na-enweta nbudata data, ndị mmepe na ndị mmemme ga-eche ọtụtụ nsogbu. Otú ọ dị, site na Scraper, ọrụ ha nwere ike mee ngwa ngwa ma dị mfe karịa mgbe ọ bụla. Nke a bụ ihe ntanetị weebụ dị mfe nke nwere ike wepụ data na tebụl, ihe oyiyi, ndepụta, na ederede. Naanị ịkwesịrị pịa bọtịnụ Scrape site na ntinye aka nri ya ma kwe ka ngwá ọrụ a rụọ ọrụ ya.
6. Anya na-ekiri anya:
Ntụle anya dị mma maka ndị chọrọ iwepụ ihe oyiyi na faịlụ vidio. Ọ bụ ihe ntanetị weebụ na-enweghị nnyefe nke na-abịa site na ntanetị dị mfe na-pịa ma jiri ya na-anakọta data dị mkpa sitere na intaneti. Ị ga-enweta data dị adị site na peeji ndị chọrọ ma wepụ ya na ụdị XML, CSV, SQL, na JSON.
7. Kwepụta Hub:
Nwepu freeware a na-enweta ọtụtụ atụmatụ na kachasị mma maka Windows, Linux na usoro nhazi ndị ọzọ. Ọ ga-eme ka ị nyochaa data site na ihe karịrị puku iri ise ibe weebụ. Otú ọ dị, mbipute nke kachasị elu nwere ike iwepu ihe karịrị 130,000 ibe weebụ n'enweghị ihe ọ bụla.
A makwaara dị ka CloudScrape, Dexi.io bụ ihe nyocha nke ihe nchọgharị weebụ. Ọ na-eme ka ndị ọrụ nyocha data ma na-enye ụdị ígwè ọrụ atọ dị iche iche ka ha rụọ ọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ ndị metụtara ịdaba, mmịpụta na ntaneti data.
Webhose.io bụ freeware nke na-enye anyị ihe nnọchiteanya onye nnọchiteanya weebụ na-amaghị aha ma na-arụ ọrụ ahụ ozugbo enwere ike. Ọ bụghị nanị na ịchapu saịtị gị mana yana data nchekwa; ọ pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị maka ịhapụ ozi bara uru ka a ga-echekwa ya na nchekwa Archive.